(Hadhwanaagnews) Friday, January 11, 2019 17:11:22
In ka badan 3 boqol oo sanno kahor dhalashadii Ciise (cs) Philip II kalsoonaa buu ku qabay qabsashashada Athens iyo Sparta. Odaygu waxa aannu kalsooni ku qabin wiilkiisii kali ahaa - Alexander. Wiilku waxa uu odayga ulla muuqday nin aan lahayn kartidii uu ku midayn lahaa gobolada Giriiga.
Labada Gobol ee kale - Athens iyo Sparta - Phillib Iyo gobolkiisa Macedonia, waxa ay ka haysteen dad badaw ah; aan lahayn xadaarad isla markaana yaqaana kaliya sida wax lo burburiyo.
Wakhtigaas Alexandre waxa uu ahaa arday, Aristotle ayaa u ahaa macalin. Casharka ugu wayn ee uu ka guntayna waxa uu ahaa: Dunnida in aad qabsaatid waxa ka xiga DARIUS III - boqorkii FAARIS. Casharkaasi waa mid ka gadisan rabitaankisii Aabihii. Aabihii waxa uu ku tamaayey qabsashadda Giriiga. Aristotle-na wiilkii waxa uu usoo liqimay qabsashadda caalamka.
Faaris waxa ka burburay wagaas nidaam dawladeed, gadaal waxa ay ka dhisteen hadana nidaam dawladeed. Su'aashu waxa ay tahay waa maxay dawladdi?
Saddexda mawduuc ee aan kala soo baxay lixda qodob macno ahaan makala foga; labo kale ayaa iyaguna si dadban usoo hoos galayaan saddexda hore. Iyagoo noqonaya Science - makiinad, tamar, tignoloji - iyo Medicine. Qodobka lixaad wuu ka durugsan yahay shanta cinwaan ee kale waa dimuqraadiyad.
Taarikh ahaan durug, dhul ahaana soo dhowoow. Quraanku wuxu ina faray gabadh boqorad ahayd oo ku noolayd Yemen. Gabadhaasi, waa Bilkhiis'e waxa ay maamuli jirtay dhul u dhexeeya laba wabi. Ethiopianka haddii aad waydiisid dawlad-nimadu xagay idinka soo gashay? Si midaysan oo kalsooni leh, waxa ay ku odhanayaan ''Dawladda Ethiopia waxa ay kasoo farcantay Magalada Yeha; abqaalkeeda waxa lahayd Bilkhis oo Yemen nooga timid''
Taarikhyahanada dunnida iyo Archaeologists* ayaa soo bandhigay raadadka ku duugan Yeha iyo dhismayaasha ama farta ku qoran magaaladda Ma'rib ee Yemen in ay isku asal yihiin. Wakhtiga iyo xaqiiqada sheekadaas ku dheeran mayo. ujeedka dawladnimo aan kusoo durko.
Bilqiis boqortooyadeedii Seba, waxay isku xidhi jirtay dunida galbeedka iyo ta barriga. Bilkhis Afrika waxa ay kasoo iibsan jirtay dahabka iyo foolka maroodiga; India waxa looga keeni jiray basbaaska halka China looga soo waaridi jiray wilka. Boqoradu marki dambe waxa ay daaha ka fayday ganacsiga beeyada. Bilkhis oo faa'ido badan ka heshay beeyada ayaa usoo wareegtay dhulka Tigrayga oo hoddan ku ahaa beeyada. Waxa ayna xarumo ganacsi ka furatay Yeha iyo Aksum.
Dawladi waa maxay? Ma aha su'aal sahlan. Gunnaanadkii su'aasha ayaa aynu soo gaadhnay. Kalmadaha aan kaga hadhayo qoraalka, waxa ay noqon doonaan qeexidayda ugu saraysa illaa hadda aan ka amminsanahay waa maxay dawladi?